मार्च 7, 2019	समाचार
यो अनलाइन क्यासिनोमा आउँदा कत्तिको महत्त्वपूर्ण बोनस हुन् अधिक मात्रामा बढ्न गाह्रो छ। यो मुख्य तत्व हो जसले मुख्यतया तिनीहरूलाई पारंपरिक क्यासिनोबाट अलग गर्दछ। त्यहाँ सामान्यतया बोनसहरूको दुई मुख्य प्रकारहरू छन् जुन प्रस्तावित गर्न सकिन्छ, साथमा वा पैसा बिना बोनस।
नामबाट स्पष्ट रूपमा, डिपोभल बोनस प्रयोग गर्न, खेलाडीले पहिला जम्मा छोड्न आवश्यक छ र त्यस पछि उसले रकमको समान बोनस (निश्चित मात्राको रकम सामान्यतया स्थापित हुन्छ) प्रदान गरिनेछ। highnoon क्यासिनो
यसैले, खेलाडीलाई पहिले नै उनको पक्षमा रकम योगदान गर्न आवश्यक छ। साइन-अप बोनस प्रायः प्रायः एक मानािन्छ। पहिलो जम्मा गर्ने बेलामा खेलाडीले पट्टि गर्न सक्नु अघि समेत कैसीनोबाट बोनसको आनन्द लिन सक्दछन्। यस प्रकारको बोनस क्यासिनोले प्रस्ताव गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो हो (यसले प्राय जसो सयौं डलरमा पुग्न सक्छ, तर केहि क्यासिनोहरूले यसलाई हजारौंमा बढाउँदैछन्)। यसले खेलाडीलाई एकै चोटि उसको खेल क्षमता बढाउन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ मासिक बोनस प्रदान गर्ने क्यासिनोहरूको पनि संख्या छ - यस प्रकारको बोनस खेलाडीहरूको लागि हो जुन पहिले नै क्यासिनोसँग खेलेका छन्। खेलाडीले गरेको हरेक जम्मा पैसा क्यासिनो मासिक बोनस रकम मा तुलनीय साथ प्रदान गर्दछ। जम्मा रकम बोनस कोड छैन
यदि अन्य खेलाडीहरूमा, अनलाइन क्यासिनो अतिरिक्त बोनस प्रस्ताव गर्दछ भने यदि खेलाडी द्वारा निर्दिष्ट जम्मा विकल्प प्रयोग गरिन्छ।
जब यो निक्षेप बिना बोनसको कुरा आउँछ, तिनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा खेलाडीबाट कुनै प्रारम्भिक योगदानको आवश्यकता पर्दैन। यस तरिकाले, खेलाडीलाई आफ्नो खेलबाट यसको भुक्तानी नगरी विभिन्न खेलहरू प्रयोग गर्न आमन्त्रित गरियो। यो ध्यान राख्नु पर्छ कि कुनै जम्मा नगरी साइन अप गर्दा बोनसको रकम जम्मा बोनसको भन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ (यो प्राय: दर्जन डलरमा सीमित हुन्छ)। यो तथ्य यो हो कि खिलाडीलाई यस चरणमा योगदान दिन आग्रह गरिएको छैन। निक्षेप साइन-अप बोनस अनलाइन क्यासिनोहरूमा यति सामान्य हुँदैन। जुम्बा शर्त
को लागी माइक्राइमिंग अनलाइन क्यासिनोहरू, उनीहरूले बोनसको विभिन्न प्रकारसँग खेलाडीलाई नि: शुल्क प्ले बोनस भनिन्छ। खेलाडीले विशेष स्लॉट्स गेमहरूमा बनाइएका निश्चित संख्याको आनन्द उठाउन सक्छन्। शर्तहरू प्रतिबन्धित अवधिको भित्र बनाइन्छ, र यदि खेलाडी सफल भएमा, उनले जितेको जित हासिल गर्न सक्दछन्।
त्यहाँ एक बोनसको प्रकार हो जुन रकम एक मित्र बोनस भनिन्छ भन्ने जम्मा गर्नु हुँदैन। यस अवस्थामा, खेलाडीले हरेक मित्रलाई बोनस बाट लाभ उठाउन सक्छ।
जम्मा संग बोनस
जम्मा रकम बोनसको रकम ठूलो हुन सक्छ र धेरै सय डलर पुग्न सक्छ
साइन-अप जम्मा बोनस बिट्टि सुरु हुने बित्तिकै आनन्द लिन सकिन्छ
यो प्रकारको बोनस धेरै सामान्य छ
प्लेयरले आफ्नो योगदान दिन्छ पछि मात्र बोनसको आनन्द लिन सकिन्छ भेगासको स्लट कुनै जम्मा बोनस कोडहरू
जम्मा नगरी बोनसहरू
खेलाडीले आफ्नो साझेदारी तिर्न आवश्यक छैन
साइन-अप बोनस बिना डिप्रेसनले खेलाडीलाई कुनै पनि भुक्तानी नगरी विभिन्न खेलहरू प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ
कुनै पनि जमातको साथ बोनस प्रायः धेरै दर्जन डलरमा सीमित छन्
यो प्रकारको बोनसहरू सट्टा नै असाध्यै छ
सबैभन्दा ठूलो सेलिब्रिटी जुआ
कपडामा टेक - सबैभन्दा वास्तविक अर्थमा पहिरन
CES 2019 ले नवीनतम टेक प्रवृत्तहरूलाई हाइलाइट गर्दछ
2017 को लागि टेक प्रवृत्तिहरू
स्पेनिश प्राधिकरणहरु को आरोही 1ST प्रो फुटबलर को मिलान फिक्सिंग
के तपाईंले मोबाइल लाइभ डीलर खेल खेल्नु हुन्छ?
के अनलाइन खरिद गर्न ई-वेल्ट सुरक्षित तरिका हो?
जम्मा बिना बोनसको साथ जम्मा बोनस को तुलना अपडेट गरिएको: नोभेम्बर 29, 2019 लेखक: Damon
1.0.1 सबैभन्दा ठूलो सेलिब्रिटी जुआ
1.0.2 कपडामा टेक - सबैभन्दा वास्तविक अर्थमा पहिरन
1.0.3 शीर्ष काल्पनिक थिस्ड स्लॉट खेलहरू
1.0.4 CES 2019 ले नवीनतम टेक प्रवृत्तहरूलाई हाइलाइट गर्दछ
1.0.5 2017 को लागि टेक प्रवृत्तिहरू
1.0.6 स्पेनिश प्राधिकरणहरु को आरोही 1ST प्रो फुटबलर को मिलान फिक्सिंग
1.0.7 के तपाईंले मोबाइल लाइभ डीलर खेल खेल्नु हुन्छ?
1.0.8 के अनलाइन खरिद गर्न ई-वेल्ट सुरक्षित तरिका हो?
1.0.9 फिनल्याण्ड शहरहरूमा क्यासिनो बोनस
1.0.10 क्यासिनो इतिहास - यो कहाँ सुरु भयो?
निक्षेप बोनसको तुलना ...